Digniin: Aalada Tiktok oo si weyn looga deyriyey iyo Qabyaaladii oo soo noolaatay! Daawo - HALDOOR MEDIA
November 16, 2021 November 16, 2021 Haldoormedia	0 Comments	Bilaal bulshaawi, Shiine coley, Somalitiktok
Aalada Tiktok oo la aas aasay 2016 ayaa sanadkan u dabaal dagtay 1BILLON oo dad ah iney ku xiran yihiin oo ey isticmaalaan. Dadka aaladaas soo dagsaday ayaa iskugu jira laba nuuc, la daawade iyo daawade. Waxaana lagu soo bandhigaa waxyaabo kala duwan iyo sii kale qofka ayaaa xirfadhiisa jiliin ama ruwaayadeen kusoo bandhiga.
Wadamada aduunka oo dhan lama isticmaalo oo waxaa jiro wadamo gabi ahaanba iska mammuucay si bulshadooda iyo dhalintooda aaladaasi ujiheen meel xun. Siyaabaha ugu waaweyn oo wadamadaas iskaga xireen ayaa ah in dhaqan xumaa iyo dhalinta iyo ciyaalka ey galiyaan waqtigooda ugu badan aaladaas. Soomaaliyada ayaa sanadihii ugu dambeeyey siweyn ugu soo biirtay aaladaan. Hadana waxaa la isticmaalaa miyi iyo maalo ba meelaha ee soomaalidu dagto.
Dhalinyada soomaaliyeed ayaa waxa ey ku soo kordhiyeen ama la imaadeen Dhaqan xumo laga Dhaxlay gaalada isticmaasha aaladaas. Muqaalo xun xun ayeeyna ku dhiiradaan si ey u helaan Love badan iyo dadk badan oo Flow dhaha.
Intaas kaliya Kuma eysan ekaan waxaa baryahaana ey kusoo kordhiyeen si love iyo Flow iyo waliba Lacag uga sameeyaan in qabiilo lookala safto taasoo dhalisay aflagaado iyo dagaal ee aaldaha Tiktok ayaantaan. Anagoo og qabyaalda meesha ey wadankeena geysay maanta in ey dhalinyadii baranayaan waa wax laga naxo
Daawo Muuqaal hoose warbixinta oo faahfaahsa:
← Qiso xanuun badan: Afar bilood ayuu Eedadiis aabihii qabo uxirnaa.
Qiso Cajiib leh: Fanaan Somali ah Heysta Malaayiin dollar oo 500dollar Xabsi ku galay! Sababta Ogoow →